မိုးရေတွေထဲမှာ ကားကိုအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ဘယ်လိုမောင်းမလဲ ? – AutoMyanmar
မိုးရေတွေထဲမှာ ကားကိုအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ဘယ်လိုမောင်းမလဲ ?
အခု မိုးတွင်းလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့ ကားမောင်းရတာ ခြောက်သွေ့တဲ့ နွေရာသီနဲ့ ဆောင်းရာသီထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေမှာဖြစ်သလို အန္တရာယ်လည်း အနည်းငယ်ပိုရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လို အခက်တွေမဖြစ်ရအောင်နဲ့ အန္တရာယ်တွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်ပြီး မောင်းနှင်နိုင်အောင် Automyanmar က ရိုးရှင်းပြီး အကျိုးရှိစေမယ့်နည်းလမ်း (၅) မျိုးကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ (အချိန်ကိုက်ပါပဲနော် ?).. စပါပြီ။
ဒီအချက်ကတော့ အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပေမယ့် လူကြီးတွေပြောနေတာတွေ၊ ကြော်ငြာတွေမှာ ခဏခဏမြင်နေ/ကြားနေရတဲ့အချက်ဖြစ်တာကြောင့် တော်တော်များများက မေ့နေ (သို့) ဂရုမစိုက်မိ တဲ့အချက်ပါ။ ပုံမှန်ခြောက်သွေ့တဲ့ရာသီမှာ ဆိုရင် ကားကိုအရှိန်မြန်မြန်နဲ့မောင်းရင် ဘရိတ်ကိုပြန်ထိန်းချုပ်ဖို့က လွယ်ကူပေမယ့် စိုစွတ်တဲ့မိုးရာသီမှာတော့ ဘရိတ်ကိုပြန်ထိန်းဖို့က ပုံမှန်ထက်အနည်းငယ်ကြာနေတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် မိုးရေထဲမှာကားမောင်းမယ်ဆိုရင် သူများတွေဘယ်လို အရှိန်နှုန်းနဲ့မောင်းနေတာကို ဂရုမစိုက်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ကားအရှိန်ကို တတ်နိုင်သမျှနည်းအောင်ထားပြီးမောင်းနှင်ပါလို့ဆိုချင်ပါတယ်။
မိုးရေထဲမှာ မိတ်ဆွေကားကို တည်နေရာယူတဲ့အခါ တတ်နိုင်ရင် လမ်းရဲ့အလယ်ဘက်ကိုယူပါ။ လမ်းရဲ့အလယ်ဘက်က မိုးသည်းနေတဲ့အချိန်ဆိုရင် ရေမြင့်တက်နှုန်းအနည်းဆုံးနေရာဖြစ်တာကြောင့် အန္တရာယ်ပိုကင်းနေမှာဖြစ်သလို ကားအတွင်းရေဝင်မှုကနေလည်း ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ။
၃. ရှေ့ကားနဲ့ မိမိကား အကွာအဝေးကိုထိန်းချုပ်ပါ
ကျွန်တော်အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း မိုးရွာကြီးထဲမှာ ဘရိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့က သာမာန်အချိန်တွေထက် ပိုမိုခက်ခဲလှပါတယ်။ ဆိုတော့ ဘရိတ်ထိန်းချုပ်မှုပိုပြီး လွယ်ကူအောင် မိမိအရှေ့ကကား နဲ့ အကွာအဝေးတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီး မောင်းသွားဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဒီအချက်က ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Tips မှာလည်းပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တာမို့ တော်တော်များများနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။
ကားကြီးဖြစ်တဲ့ ထရပ်လိုမျိုးကားတွေဟာ သူတို့သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်က ရေတွေကို တာယာကြီးတွေနဲ့ ရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် မိတ်ဆွေအနေနဲ့ သူတို့အနောက်က ကပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် မိမိရဲ့တာယာ ပျက်စီးမှုကနေအနည်းငယ်ကာကွယ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၅. ကားရဲ့ Headlight ကိုဖွင့်ပေးထားပါ
ဒီအချက်ကတော့ အရေးကြီးဆုံးအချက်ပါ။ မိုးသည်းကြီးမဲကြီးရွာပြီဆိုတာနဲ့ မိမိကားရဲ့ Headlight ကိုသာကောက်ဖွင့်ထားလိုက်ပါတော့… နေ့ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ညပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် လမ်းသွားလမ်းလာတွေ၊ ကားမောင်းသူတွေအားလုံးဟာ မိုးရေတွေကြောင့် မြင်ကွင်းတွေဟာသာမာန်အနေအထားဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုတော့ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ကား Headlight ကို မိုးရွာကြီးထဲမှာအမြဲဖွင့်ထားခြင်းဖြင့် မိတ်ဆွေရဲ့တည်ရှိမှုကို တခြားသူတွေသိရှိသွားမှာဖြစ်ပြီး မတော်တဆဖြစ်ပျက်မှုရန်ကလည်း အလိုလိုကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါ။
အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တာတွေကတော့ မိုးရွာတဲ့အချိန်ကားကို အန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့မောင်းနှင်နိုင်အောင် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ကူညီပေးမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။